40 arday oo ka qalin jabisay tababarro xirfadda gacanta ah oo ay fulisay GECPD. – Radio Daljir
40 arday oo ka qalin jabisay tababarro xirfadda gacanta ah oo ay fulisay GECPD.
Abriil 19, 2012 12:00 b 0
Galkacyo, Apr 18 – Munaasabad lagu maamuusayey qalin-jabin ardayeed ayaa galabta lagu qabtay xarunta hay’adda maxalliga ah ee GECPD, faraceeda u gaar ah arrimaha nabadda iyo dhallinyarada ee ‘Youth Peace Center’.
Munaasabaddaasi ayaa ahayd mid shahaadooyin lagu guddoonsiinayey 40 arday oo muddo lix bilood ah baranayey xirfado xagga gacanta ah oo iskugu jiray samaynta noocyada qalabka alwaaxyada ah sida qori-saarka guryaha, samaynta sariiraha iyo miisaska, halka qayb kale oo isla ardaydaasi ka mid ahna ay barteen alxanka iyo biraha guraha oo albaabada iyo daaqaduhu ay ku jiraan.
Hindisaha dhallintaasi lagu barayey xirfadaha gacanta waxaa maalgalisay hay’adda UNCHR iyo dawladda Canada, halka hay’adda waddaniga ah ee GECPD-na ay fulinaysay layliyada aqooneed ee ardaydaasi loo sameeyey.
Xafladda qalin jabinta waxaa ka qaybgalay wakiillo matalayey maalgaliyayaasha oo uu ka mid ahaa wakiilka hay’adda UNHCR u qaabilsan Soomaaliya Bruno Gedo, mas’uuliiyiin kale oo isla hay’addaasi ah iyo agaasimaha hay’adda maxalliga ah ee fulisay tababarkaan GECPD Marwo Xaawo Aadam Maxamuud ‘Camey’.
Mas’uuliyiintasi kala duwan oo ka hadlay madasha ayaa ku dheeraaday ahmiyadda ay leeyihiin xirfadaha gacanta, waxaana ardaydii qalin-jabisay ay ku dhiirro galiyeen kororsiga aqooneed ee himnadaha kala duwan ee ay barteen.
“Waxaannu hay’adda UNHCR uga mahadcelinaynaa taageerada joogtada ah ee ay har iyo habeen nala daba taagan yihiin, mana ahan oo kaliya saacidaaddoodu iyo wada shaqayntayadu xirfadaha gacanta, laakiinse meelo badan ayey nagala shaqeeyaan waana ku mahadsanyihiin” Xaawo Aadan.
Ardayda maanta loo soo gabagabeeyey aqoonta xirfadaha gacanta ayaa badankoodu ka soo jeeda dadka barakacayaasha ah ee gobolka ku dhaqan, iyadoo xafladdana ay goob joog ka ahaayeen waaliddiinta ardaydaasi iyo matalayaal kale oo ka socday in ka badan 19 xero oo barakacayaashu ay ku leeyihiin Galkacyo.
Guddoonsiinta shahaadooyinka ka sakow, waxaa ardaydaasi la mulkisiiyey qaar ka mid ah qalabkii ay farsameeyeen, iyadoo qofkasta la siiyey mid ka mid ah wax soo saarkiisii xirfadeed.
Ma ahan markii ugu horraysay oo GECPD sidaan oo kale tababar ugu soo xirto arday baratay xirfado gacmeed, waxaana kuwaan ka horreeyey dhawr dacfadood oo isla aqoontaan oo kale iyo mid ka duwanba bartay.
War saxaafadeed – R/Wasaare Gaas oo kormeeray jiida hore ee ciidanka ee Dayniile, Muqdisho.
Baahin: Arbaca, Apr 18, Axmed Jookar ~ Daljir ~ Bossaso. Dastuurka Puntland oo cod aqlabiyad ah lagu ansixiyey; 9 caruur ah, oo laga soo xaday koonfurta Somaliya, laguna qabtay Bossoso, oo lagu wareejin doono waalidkood; 2 qof oo ku dhaawacmay duqaymo ay diyaaradaha dagaalka ee NATO ka fuliyeen xeebta gobolka Bari.
on Mareykanka oo $1 milyan duldhigay madaxa nin Soomaali Kenyan ahWAaan hayaa